UBob Iger uphatha iDisney futhi | Ngivela kwa-mac
UBob Iger uphatha iDisney futhi
NgoMashi 30, kwaba nokushiya ngokusemthethweni kukaBob Iger njengenhloko yeDiseny, isikhundla asiphethe eminyakeni eyi-15 edlule futhi esenze le nkampani yaba umholi emkhakheni we-audiovisual emhlabeni jikelele U-Iger umemezele ukushiya kwakhe isimanga ekupheleni kukaFebhuwari, yize bekuvele kuhlelwe.
Isikhundla sakhe sizogcwaliswa okwesikhashana nguBob Chapek, inhloko yamapaki wokuzijabulisa iDisney anayo e-United States, Europe nase-Asia, yize u-Iger abezoba yingxenye yebhodi labaqondisi usizo kunoma yini edingekayo. Ngokubika kwe New York Times, umhlalaphansi ka-Iger ube wesikhashana njengoba esebuyile ukuzophatha le nkampani.
Ngokwalo mthombo wezindaba, ngenxa yenkinga yomhlaba eyenziwe yi-coronavirus, IDisney ilahlekelwa yizigidi ezingama- $ 30 nsuku zonke, futhi waphoqa inkampani ukuthi iboleke u- $ 6.000 billion ekupheleni kwenyanga edlule. Ukuzama ukonga isixazululo, ibhodi labaqondisi liphoqeleke ukuthi licele u-Iger ukuthi ahole kabusha inkampani ukuzama ukuphuma kulolu bhubhane ngokusemandleni.
UBob Chapek akakwazanga ukubhekana nesimo abebengasilindele noma basibone siza no lOkuhlangenwe nakho kuka-Iger kuwumlomo onomoya-mpilo Asazi ukuthi kuzohlala isikhathi esingakanani Umkhakha wezinto ezibukelwayo ubambezele ama-premieres amaningi ahlelelwe lezi zinyanga ekupheleni konyaka noma ekuqaleni konyaka ozayo. Yonke imikhiqizo yakho ikhubazekile (kufaka phakathi leyo eyenzelwe ukusakazwa kwezinsizakalo zevidiyo). Umkhakha wezinto ezibukwayo ubhekene nesimo abazodinga ukusinqoba ngomonakalo omkhulu kakhulu.
Selokhu kwaqala inkinga, izinkampani ezimbili kuphela ezihola imakethe yamasheya e-United States lokho angikaboni ukuthi inani lamasheya liyehla yi-Amazon neMicrosoft. Ngenkathi iMicrosoft izuze ekusetshenzisweni okwandisiwe kwezinsizakalo zayo zamafu, iAmazon isibe ukuphela kwendlela yokuqhubeka nokuthenga noma yimuphi umkhiqizo ngokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » UBob Iger uphatha iDisney futhi
Kulo nyaka siphelelwe inselelo yoSuku Lomhlaba
USonos wethula iziteshi zomsakazo zamahhala